Manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 180 andro ny sambo fitsangantsanganana dia amidy ao anatin'ny iray andro
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 180 andro ny sambo fitsangantsanganana dia amidy ao anatin'ny iray andro
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny valin'ny fitsangantsanganana eran-tany tamin'ny taona 2023 dia maneho mazava ny hafanam-po ananan'ireo mpandeha za-draharaha amin'ny traikefa fitetezana lalina sy tsy hay hadinoina
Ny sellout iray andro dia manasongadina ny filan'ny mpanjifa manankarena amin'ny dia an-tany
Hiantso seranana 96 any amin'ny firenena 33 manerana ny kaontinanta efatra ity fitsangantsanganana ity
2023 Manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 180 andro ny dia an-dranomasina no fitsangantsanganana malalaka sy lalina indrindra amin'ny fitsidihana an'izao tontolo izao
Oceania Cruises, zotra fitsangantsanganana an-tsakafo sy any amin'ny toerana itodiana, dia nanambara fa ny dia an-tsambo 2023 Manerana an'izao tontolo izao tao anatin'ny 180 andro dia namidy tao anatin'ny iray andro nanokafana amidy tamin'ny besinimaro tamin'ny 27 Janoary 2021.
"Ny valin'ny epiko 2023 nanerana an'izao tontolo izao dia maneho mazava ny hafanam-pon'ny mpitsangatsangana efa za-draharaha amin'ny traikefa fitetezana lalina sy tsy hay hadinoina", hoy i Bob Binder, filoha sady Lehiben'ny Executive Executive an'ny Cruises Ranomasimbe. "Na eo aza ny fanamby atrehin'izao tontolo izao ankehitriny, ny mpitsangatsangana dia mazoto milaza ny ho avy ary mandray ireo fahafaha-manao vaovao hitety an'izao tontolo izao sy hamorona fahatsiarovana maharitra."
Raha ny fitsangantsanganana an-tsambo eran-tany dia mazàna mahasarika legiona vahiny tsy mivadika tsy mivadika, ny fitsangantsanganana an-dranomasina an'ny Oceania Cruises '2023 dia nahitana ny ampahatelon'ny famandrihana rehetra nanomboka tamin'ny voalohany, vahiny vaovao. Izany dia mampiroborobo ny fironana famandrihana izay hitan'ny marika tsy nitsaha-nitombo nandritra ny taona lasa izay nisy fe-potoana famandrihana sy fanentanana nandrakitra ambaratonga famandrihana vaovao hatramin'ny 50%. Ho fanampin'izany, 20% feno ny mpitsidika fitsangantsanganana an-tany dia nisafidy ny hanitatra ny diany hatramin'ny 218 andro.
Ny tsipika 2023 Manerana an'izao tontolo izao amin'ny fitsangatsanganana 180 Days no fitsangantsanganana betsaka indrindra sy lalina indrindra amin'ny fitsidihana an'izao tontolo izao misy. Miantso seranan-tsambo miisa 96 any amin'ny firenena 33 manerana ny kaontinanta efatra, koa ny dia an-tsambo dia misy fitsangantsanganana mandritra ny telo andro ao Antarctica ary ahafahan'ny mpitsidika miditra amin'ireo tranokalan'ny UNESCO mihoatra ny 60.